Buy Go belt in Myanmar (5,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
Go belt in Myanmar
Go belt ဆိုတာက ပိုက်ဆံထည့်၊ ဖုန်းထည့်၊ သော့ထည့်ရန် ခါးပတ် – go blet
Go belt is belt for phone, key, money
Go belt နဲ. ဘာမဆို ထည့်နိုင်ပါမယ်။
It is belt that you can put everything in this belt
အကျီ င်္၊ ဘောင်းဘီ အိတ်မရှိမှာကို ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။
you don’t need to worry that your shirt has no pocket
အားကစားလုပ်ရင်း ဖုန်းထည့်လို. ရမယ်
Put your phone in go belt while playing gym or football
ဘောပင်လေးတွေကိုလည်း လွယ်လင့်တကူ ယူသွားလို. ရမယ်။
You can take easily ball pen easily in go belt
စာအုပ်အသေးတွေ သာမက ဖုန်းဘလဲ့ အကြီးတွေကိုတောင်မှ
You can carry even if phone blet and small book
(Delivery free in Yangon)
Rocket Online Shopping facebook Page
ဒုံးပျံကဲ့သို. အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို. အိမ်အရောက်
အမည်: Go belt in Myanmar